Taariikhda My Butros » 5 Dating hardamayaan aad jebiso waxaa habboon iyo cararaan From
Waa maxay sababta mid ka mid la soo galla ay la hardamayaan shukaansi? Inta la raacayo dhaqan, kuwaas oo dadka ay joojiyaan ka socda guud ahaan qofka saxda ah waqtiga saxda ah; iyadoo heerka kordheen sida baadhitaano iyo Furitaanka kala, tani waa kaliya la rogi karin. Sidaas, waxa ugu horeeya ee aad sameyneysid ka hor ka baxday taariikhda la jabiyay hardamayaan kuwaas. Halkan waxaa ku qoran qaar ka mid ah la hardamayaan shukaansi waa in aad uga takhalusi.
1 Oh! Nin u eg wanaagsan, laakiin waa ka gaaban igu badan.
Maxaa ku jira height? Sidee xiriir tegi kartaa qalad oo kaliya sababtoo ah ninka ka yar tahay qof dumar ah? Halkii hubinta on Nin height, waa in aad lacag bixisid si uu caafimaadka fiiro gaar ah, Qof, waxbarashada iyo ismariyaan. Dabcan waxaad tagi kartaa tayada dheeraad ah oo maqaar saar sida looks wanaagsan, iyo koboca (haa jeer qariban kuwa), laakiin samaynta go'aamo ku saleysan nin dhererka ma ahan oo kaliya u qalantaa.
2 Waxaan waa in aan marnaba la mid ah ay ku tallaabsato noqon.
Tani waa mid ka hadlin shukaansigu xitaa caqabad qaar ka mid ah oo kulay haweenka coolest. Hadlin Tani dhab ka imanaysaa mala'awaal jeedinaya in haweenka jecel yihiin shukaansi ku kalsoon, rag xoog badan oo jira go-getters iyo raga waxaa lagu soo jiitaa si fudud dumarka u keeni kartaa inay xoog, kalsooni iyo tag-helidda. Tani waa uun qashinka.
Gebi ahaan waa qalad in loo qaato in dadka oo dhan waa isku mid. Waxaa jira dad badan, oo ay haa tahay dad badan oo sabab u ah cabsi daran ee diidmada marnaba weydiisan ay haweenka ka; haweenka had iyo jeer u baahan yahay in uu qaado tallaabo marka hore ha la saaro ama galmo waydiinaya iyaga. Tani, Si kastaba ha ahaatee, wax la dhisayaa xaqiiqada ah in ragga oo kale ma noqon kartaa la-hawlgalayaasha nolosha weyn ama (haddii aadan raadinaya in ilaa hadda) saaxiibadiisa shukaansi.
3 Waxa uu wax iga weydiinayay in aan kala tagno biilka; waa inuu ixtiraam dhabta ah ee haweenka.
Ma aha daruuri; ahayn ka maqan fursad ay ku soo bandhigo inuu daryeel is, ilaa raba in aan kala tagno rag biilka uu dhamaado muujinaya Bakhaylnimo noqday. Ka dheerow ragga sida.
4 Waxa kaliya taariikhda horeeyaana; sida karaa in aan galmo?
Haweenka dhibeen this laga hadlin shukaansiga xun u qaadan in ragga marna ixtiraamaan karaa dumarka qaatay saaxiib habeenkii ugu horeeyay oo sidaas weligiin ma turunturoon jacayl iyaga la.
Haweenka kuwa waa inay xusuustaan ​​in ay xiriir weyn oo inta badan waa ku saabsan dhimbiil ah dagdag ah ama chemistry. In aad galmootay taariikhda ugu horeysay, Ma ahan mid aad u fudud. Sex on koowaad ee taariikhda si fiican ayaa laga yaabaa in tilmaame xaqiiqada ah in adiga iyo saaxiibkiisa shukaansi cusub ayaa gelling run ahaantii si fiican u wada.
5 Nin, taasina waa quruxsan sasabasho, laakiin waxa uu saaxiibkey.
Hadlin ayaa sheegtay in xiriirka u dhexeeya jaceyl asxaabtii inta badan waa ku noolaa-gaaban u sabab tahay arrimaha sida masayrka, Wareersan, eex iyo Qoreen. Dad badan ayaa sidoo kale ka fog xiriirrada noocaas xishoodaa iyagoo ka cabsi qaba in weyni ka ah nolosha dhigi karta goob shaqo ahaanba ugu gataan, iyaga.
Ka saar ee laga hadlin arrintan sida ugu dhaqsiyaha badan sida laga yaabo in aad heshaa qof aad ka nolol kaamil ah oo aad workmate. Waxa ugu fiican ee ku saabsan xiriirrada noocaas ah waa in ay laba idinka mid ay heli doonaan in ay waqti badan la qaataan midba midka kale; aad wada u safri kartaa oo shaqada ka, aad wada leeyihiin kartaa qadada, ka qayb qaadato xafiiska karaa xaflado iyo wixii la mid ah. Kaliya u hubso in farqiga shakhsi (markii ay jiraan wax) ma saamayn shaqada.
Ha u ogolaanin hardamayaan kuwaas oo matala doorarka weyn marka go'aan ku saabsan qof. Haddii sidaa la sameeyo dhigi doonaa oo kaliya in aad sugto aad saaxiibkiisa Naf.